Home | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss | Page 12
Home / Archive by category Home (Page 12)
Qarax dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Giza dalka Masar
Dad gaaraya 7 qof oo isugu jiray ciidamada Booliiska iyo dad shacab ah ayaa xalay ku dhintay qarax ka dhacay daarweyn oo ay ciidamada amaanka ka fulinayeen hawlgal-baaritaan. Qaraxan oo ka dhacay daar ku taal deegaanka Giza ee duleedka caasimada Qaahira ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof, sida ay sheegtay Wasaarada Arrimaha Gudaha […]
UK oo ku eedaysay Putin dilkii Sarkaal hore ee KGB oo lagu dilay London
Baaritaan muddo dheer socday kadib ayaa lagu shaaciyey in sirdoonka Ruushka uu ka danbeeyey dilkii loo geystay sarkaal horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka KGB oo sanadkii 2006 lagu dilay magaalada London. Alexander Litvinenko oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonkii Ruushka ee KGB ayaa dilkiisa loo adeegsaday sunta (radioactive polonium-210) oo shaaha loogu daray xili […]
Russia oo dacwad kusoo oogtay Hogaamiyaha Muslimiinta Tatarka Ukraine
Maxkamada Jasiirada Crimea oo uu Ruushka ka qabsaday dalka Ukraine ayaa Khamiistii shalay shaacisay in dacwad lagu soo oogay hogaamiyaha muslimiinta ku dhaqan Jasiiradaasi ee loo yaqaan Tatarka Mustafa Jemilev oo ah 72 sano jir ayaa weli xubin ka ah Baarlamaanka Dalka Ukraine waxaana laga soo doortaa jasiirada Crimea, wuxuuna kamid ahaa siyaasiyiintii sida weyn […]
Maraykanka oo weli baadi-goobaya Askar saarneyd labo diyaaradood oo kusoo dhacay Hawaii
Ciidamada bada ee Maraykanka ayaa weli baadi-goobaya 12 askari oo la socday labo diyaaradood oo nooca Helikobterka ah oo kusoo dhacday nawaaxiga Jasiirada Hawaii. Diyaaradahan uu lahaa militariga Maraykanka ayaa la rumeysan inay isku dhaceen, shilkaasi oo dhacay Khamiistii lasoo dhaafay ayaan la ogeyn waxa sababay, waxaana maalmihii lasoo dhaafay socday baadi-goobka rakaabkii diyaaradahaasi saarnaa. […]
Pakistan: Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday Jaamacad
Maleeshiyo hubeysan ayaa saaka oo Arbaca ah gudaha u galay jaamacada Bacha Khan-universiteit oo ku taal magaalada Charsadda, waqooyiga wadanka Pakistaan. Wararka kasoo baxaya ciidamada amniga iyo warbaahinta Pakistaan ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof ku dhinteen weerarka lagu qaaday Jaamacadaasi oo ay dhigtaan arday gaareysa 3000. Dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku […]
Mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland oo ka dhacay Buuhoodle
Mudaaharad aad u ballaaran oo looga soo horjeedo farogelinta Somaliland ee Gobolada Sool iyo Cayn ayaa ka dhacay magaalada Buuhoodle. Mudaaharaadka ayaa daba socdey kadib markii ciidamo si xooggan u hubeysan oo ka tirsan maamulka Somaliland ay qabsadeen tuulada Balli-Cad, halkaas oo ay ku sugnaayeen siyaasiyiin ka tirsan maamulka Khaatumo , sida Madaxweynaha Khaatumo Cali […]
Dowlada Falastiin oo xirtay Mas’uul u basaasayey Isra’iil
Waxaa Axadii shalay xabsiga loo taxaabay mas’uul sare oo ka tirsan maamulka Falastiin kaasi oo la sheegay inuu si qarsoodi ah ugu basaasi jiray maamulka Isra’iil. Jariirada Al Ayyam ee kasoo baxda dhulka Falastiin ayaa sheegtay in mas’uulkan oo aan weli magaciisa la shaacin uu muddo 20 sano ah usoo shaqeenayey xisbiga PLO ee Falastiin. […]
Somaliland oo xukun dil ah ku fulisey Haweeney iyo Wiilkeedi. Kadib markii ay dileen Haweeney kale
Maamulka Somaliland ayaa mar kale maanta dil qisaas ah ku fuliyey saddex qof oo ay ku jiraan haweeney iyo wiilkeedi. Xukunka Dilka ayaa ka dhacay duleedka danbe ee xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Mandheera. Waxaa saxaafadda u xaqiijiyey Cabdirisaaq Siciid Ayaanle oo ah Xoghayaha joogtada ah ee Golaha Wakiilada Somaliland. Haweeneyda xukunka dilka ah […]
Daacish oo weerar bambaano ku qaaday Hogaamiye Dhaqameed Afganistaan
Magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistaan ayaa saaka oo Axad ah weerar ismiidaamin ah lagu qaaday guri uu degen yahay Hogaamiye dhaqameed. Wararka ayaa sheegaya in qof bambaano sitay oo isku qarxiyey guriga uu degen yahay nin lagu magacaabo Obaidullah Shinwari oo kamid ah Issimada qabaa’ilka bariga wadankaasi Afghanistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu […]
Shirkii madasha wada -tashiga qaran ee kismaayo oo weli xal laga gaarin
Shirkii Madasha wada tashiga qaran ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada KIsmaayo ayaa soo xirmay, iyadoo Madaxdii Soomaalida ku gaarin is af-garad, kadib markii labadii cisho ee u dambeysay lahaayeen kulamo wada tashi ah oo looga hadlayay nooca doorasho ee dalka ka dhici karta. Madaxda shirka ka qeyb galeysa ayaa wali […]